အင်္ဂလိပ်စာသင်ယူရင်းကနေ ဘယ်လို ရလဒ်ကောင်းတွေ ရနိုင်မလဲ ? | MyanLearn Article
အင်္ဂလိပ်စာသင်ယူရင်းကနေ ဘယ်လို ရလဒ်ကောင်းတွေ ရနိုင်မလဲ ?
အင်္ဂလိပ်စာ ဘာလို့များ အသည်းအသန် သင်နေကြတာလဲ?
အရှင်းလေးပါ။ E စကေးကောင်းမှ ဝင်ငွေများများရနိုင် မယ်၊ မျက်နှာပွင့်လန်း လူရှိန်သူရှိန်ရှိမယ်။ ကမ္ဘာပတ်နိုင်မယ်။ ကမ္ဘာ့ဂန္တဝင်စာပေကြီးတွေဖတ်မယ်။ ပညာရပ်တစ်ခုလေ့လာတဲ့အခါမှာ ပိုထဲထဲဝင်ဝင် လေ့လာနိုင်မယ်။ အဲ့ဒါတွေကြောင့် E စကေးကောင်းအောင် အသည်းအသန် သင်နေရတာပေါ့။ ဒါတွေက အပေါ်ယံ သဲ့ပြောထားတာပဲ ရှိပါသေးတယ်။ အခုပြောပြထားတာထက်ကို ပိုပါတယ်။
ဒီတော့ ကျွန်တော်တို့တွေ အင်္ဂလိပ်စာသင်ယူရင်းကနေ ဘယ်လိုရလဒ်ကောင်းတွေ ပိုင်ဆိုင်နိုင်မလဲဆိုတာ ဆက် ဖတ်ကြည့်လိုက်ရအောင်။
☑ English Speaking ကောင်းချင်တာလား? Pronunciation ကောင်းချင်တာလား? Vocab ကြွယ်ချင်တာလား?
စကေးအားလုံးကို MyanLearn ရဲ့ SPEAK ENGLISH Online Course မှာ သင်ယူကြည့်ဖို့ အကြံပြုပါတယ်ရှင့်။
MyanLearn App ကို ပေးထားတဲ့ လင့်ခ်ထဲဝင်ကာ Download ဆွဲပြီး အခမဲ့အစမ်းသင်ခန်းစာတစ်ခုကိုလည်း try ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
၁ ) တခြားဘာသာစကား ကူးပြောင်းသင်ယူတဲ့အခါမှာ လွယ်ကူစေပါတယ်။
▫️အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားတတ်မြောက်ထားပြီဆို တခြားဘာသာစကားသင်ယူရာမှာ သိပ်မခက်ခဲ‌တော့ဘူးလို့ စာ တွေမှာ ဖတ်မှတ်ကြားသိခဲ့ရပါတယ်။ ပြောရရင် အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားမှာ တခြားဘာသာစကားရဲ့ စကားလုံး ပေါင်းမြောက်များစွာကို ပေါင်းစပ်ထည့်သွင်းထားတာကြောင့်ပဲ ဖြစ်တယ်။ ပြင်သစ်၊ တရုတ်၊ ဂျပန်၊ အိန္ဒိယ၊ စပိန်၊ ပေါ်တူဂီ စတဲ့ဘာသာစကားများကို တိုက်ရိုက် (သို့) သွယ်ဝိုက်ပြီး ထည့်သွင်းထားတယ်။ အဲ့တော့ ကိုယ်က အင်္ဂလိပ် ဘာသာစကားကိုသာ သေချာတတ်မြောက်ထားမယ်ဆို တခြားကိုယ်လေ့လာချင်တဲ့ ဘယ်ဘာသာစကားကိုမဆို လွယ်ကူစွာ ကူးပြောင်းသင်ယူနိုင်မှာပဲ ဖြစ်တယ်။ ဒါဟာ အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားလေ့လာခြင်းကနေ ရရှိလာမယ့် အကျိုးကျေးဇူးတစ်ခုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
၂ ) ပညာရေးမှာ ထောက်တိုင်သဖွယ်ပါပဲ။
▫️ကမ္ဘာ့နာမည်ကြီးတက္ကသိုလ်အများစုကိုကြည့်မယ်ဆို အမေရိကန်၊ အင်္ဂလန်နဲ့ သြစတေးလျ လိုမျိုး နိုင်ငံတွေမှာ ရှိတာများတယ်။ အဲ့လိုတက္ကသိုလ်တွေ တက်နိုင်ဖို့ အင်္ဂလိပ်စာ ကျွမ်းကျင်တတ်မြောက်ဖို့လိုတယ်။ အခုနောက်ပိုင်း ဆို လူငယ်တိုင်းလိုလိုက ပညာသင်ဆု ( Scholarship ) ရဖို့ အပြိုင်အဆိုင်ကြိုးစားကြတယ်။ အဲ့လိုလျှောက်ရင် လည်း အင်္ဂလိပ်စာလိုတာပဲ။ ပြီးတော့ အခုလို ကပ်ရောဂါကာလမှာဆို နိုင်ငံတကာ နာမည်ကြီးတက္ကသိုလ်တွေက သင်ချပေးနေတဲ့ Online Course တွေတက်ပြီးလည်း Digital Certificate တွေ ယူနိုင်တယ်။ ဒါပေမယ့် အင်္ဂလိပ်လို သင်တာတွေချည်းပဲ။ အဲ့ဒါကြောင့် ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ အင်္ဂလိပ်စာသင်ယူခြင်းကနေ ရလာနိုင်မယ့် အကျိုးကျေးဇူးကို ပြောပါဆို ကိုယ့်ပညာရေးအတွက် ထောက်တိုင်သဖွယ်ပါပဲလို့ ပြောချင်ပါတယ်။
၃) ပိုမိုကောင်းမွန်သော အနာဂတ်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းဆီ တက်လှမ်းနိုင်လာမယ်။
▫️ အလုပ်ခွင်ထဲက ဝန်ထမ်းတွေ ပိုနားလည်ပါတယ်။ Job Requirement မှာထဲက အင်္ဂလိပ်စာ ကျွမ်းကျင်ရမယ်၊ အင်္ဂလိပ်စာ ဘယ် Level ရှိရမယ်၊ အင်္ဂလိပ်လို ပြောဆိုဆက်သွယ်နိုင်ရမယ်ဆိုပြီး ပါပြီးသားပါ။ အဲ့တော့ အလုပ် လိုအပ်ချက်အရ အင်္ဂလိပ်စာ တတ်မှကို ဖြစ်တော့ပါမယ်။ နောက်ပြီး အင်တာဗျူးမှာဆိုလည်း ကိုယ့်ထက် အင်္ဂလိပ် စာကောင်းသူက နေရာကောင်းကောင်းရတာမျိုး၊ ယှဉ်ရွေးရတော့မယ်ဆိုရင် အများစုက ရွေးချယ်ခံရသူအဆင့် သတ်မှတ်ထားတာမျိုး ရလေ့ရှိပါတယ်။ အဲ့တော့ အင်္ဂလိပ်စာသင်ယူခြင်းကနေ ရနိုင်မယ့် အကျိုးကျေးဇူးက ဘာဖြစ်မလဲဆို အနာဂတ်မှာ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းကောင်းတွေ ရနိုင်လာမယ်လို့ တထစ်ချ ပြောရမှာပါပဲ။
၄) စကားပြောဆိုဆက်သွယ်နိုင်စွမ်း ကျယ်ပြန့်လာမယ်။
▫️အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားက ကမ္ဘာပေါ်မှာ လူသုံးအများဆုံး ဘာသာစကားတစ်ခုလည်း ဖြစ်တယ်။ အင်္ဂလိပ်စာ ကျွမ်း ကျင်သူက ဘယ်နေရာမှာမဆို မျက်နှာပွင့်တာပဲ။ ကိုယ့် Network ကလည်း ကျယ်လာမှာ အသေအချာပါပဲ။ တကယ်လို့ ကိုယ်က ဂျပန်နိုင်ငံသွားတယ်။ ဂျပန်လိုမတတ်လည်း အင်္ဂလိပ်လို တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် စကားပြောဆိုဆက်သွယ်နိုင်တယ်။ အင်္ဂလိပ်စာသင်ယူထားမယ် ကျွမ်းကျင်ထားမယ်ဆို သိပ်အခက်အခဲမရှိဘူး ဆိုတာကို ပြောချင်တာပါ။ ဒါဟာ ဥပမာပြောပြထားတာပဲ ရှိပါသေးတယ်။ နောက်ပြီး ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တွေ၊ ပညာရေးနယ်ပယ်ကလူတွေနဲ့ တခြားနယ်ပယ်ပေါင်းစုံကလူတွေနဲ့ စကားပြောဆိုဆက်သွယ်နိုင်မှာပါ။ အဲ့ဒါကြောင့် အင်္ဂလိပ်စာသင်ယူခြင်းကနေ ဘာအကျိုးကျေးဇူး ရနိုင်လဲဆို ကိုယ့်ရဲ့ စကားပြောဆိုဆက်သွယ်နိုင်စွမ်း ကျယ်ပြန့် လာမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
▫️ဘယ်အသက်အရွယ်မဆို ဘာသာစကားတစ်ခုကို လေ့လာတဲ့အခါ ဦးနှောက်လုပ်ဆောင်ချက်က တိုးတက် လာပါတယ်။ အထူးသဖြင့် စာသင်ခန်းထဲ၊ သင်ခန်းစာထဲမှာ ကာရန်နဘေး၊ တေးသီချင်းများ၊ ဂိမ်းဆန်ဆန် သင်ခန်းစာများကို အသုံးပြုတဲ့အခါမှာ ပိုပြီးဦးနှောက်မှတ်ဉာဏ် ကောင်းလာတယ်။ အသက်အရွယ်အလိုက် ဦးနှောက်မှတ်ဉာဏ်ဟာ ပြောင်းလဲသွားပေမယ့်လည်း ဘာသာစကားတစ်ခုထက်ပိုသိတဲ့လူတွေဟာ ရေရှည် အာရုံစိုက်နိုင်စွမ်းနဲ့ အာရုံစိုက်ဖြေဆိုရမယ့် စစ်ဆေးမှုများမှာ ပိုကောင်းကောင်းလုပ်နိုင်တဲ့ ရလဒ်များ တွေ့ခဲ့ ရပါတယ်။ အဲ့ဒါကြောင့် အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာခြင်းရဲ့ ကောင်းကျိုးတစ်ခုကိုပြောပါဆို မှတ်ဉာဏ်ကောင်းစေ တာကလည်း အပါအဝင်ဖြစ်မှာပါ။
အစပိုင်းမှာ သင်တန်းတွေတက်လိုက် စိတ်ဓာတ်တွေကျသွားလိုက် ပြန်ကြိုးစားလိုက်နဲ့ ရုန်းကန်ရပေမယ့် နောက် ပိုင်းအဆင်ပြေသွားမှာပါ။ အဓိကက တော့ ဇွဲမလျော့ဖို့ပါဘဲ။ အင်္ဂလိပ်စာ တတ်စေရမယ်လို့သာ စိတ်ထဲကြုံးဝါးသား သေချာပေါက် တတ်မြောက်မှာပါ။
အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာဖို့ လိုက်ရှာနေတယ်ဆိုရင် MyanLearn ရဲ့ SPEAK ENGLISH Online Course မှာ လေ့လာကြည့်ဖို့ ညွှန်းချင်တယ်။ ဘာလို့ဆို သင်ခန်းစာတွေက စိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်းပြီး စာသင်နေရတယ်လို့တောင် မထင်ရတာက ဒီအတန်းလေးရဲ့ အားသာချက်တစ်ခုပဲဗျ။
စာလည်း အတော်ရှည်နေပြီမို့ အခုဆောင်းပါးလေးဖတ်ရတာ အကျိုးရှိရင် မိတ်ဆွေတွေကိုလည်း လက်ဆင့်ကမ်း ဝေမျှပေး ပါဦးနော်။